आज र भोली विश्वकपको महासंग्राम,यी बाँकी ८ टोली कसले—कोसँग गर्दैछन् भिडन्त ? सूची सहित - २२ असार २०७५, NepalTimes
आज र भोली विश्वकपको महासंग्राम,यी बाँकी ८ टोली कसले—कोसँग गर्दैछन् भिडन्त ? सूची सहित
एजेन्सी ः रुसमा जारी फिफा विश्वकपको २१ औं संस्मरण अन्तरगत मंगलबार रातिको खेलपछि प्रिक्वाटरफाइलनका खेल सकिएका छन् । अब क्वाटरफाइलनका खेलका लागि आठ वटा टोली छनोट भएका छन् । विश्वकपमा सहभागी ३२ राष्ट्र मध्ये समूह चरणबाटै १६ र अन्तिम १६ बाट ८ गरी २४ टोली प्रतियोगिताबाट बाहिरीसकेकेका छन् । अब आयोजक रुससहित, उरुग्वे, फ्रान्स, क्रोएसिया, ब्राजिल, बेल्जियम, इङ्ल्याण्ड र स्वीडेन प्रतिस्पर्धामा रहेको छन् । अब क्टाटरफाइलनका खेल आगामी शुक्रबार २ वटा र शनिबार २ वटा हुनेछन् ।
क्वाटरफाइलनमा कसको प्रतिस्पर्धी को ?
जुलाई ६ (शुक्रबार)
जुलाई ७ (शनिबार)
कुन टिम कसरी पुगे अन्तिम ८ मा ?
आयोजक रुसले स्पेनलाई निराश टाइबे्रकरमा ४ – ३ गोल अन्तरले हराउदैँ क्वाटरफाइनलको यात्रा तय गरेको छ । निर्धारित र अतिरिक्त समयको खेल १–१ को बराबरीमा टुंगिए पछि खेल निर्णयार्थ टाइबे्रकरमा पुगेको थियो । क्रोएसियाले डेनमार्कलाई पनि टाइबे्रकरमा ३–२ ले गोल अन्तरले हराउदैँ क्रोएसिया अन्तिम ८ मा पुगेको थियो ।
निर्धारित र अतिरिक्त समयमा १–१ गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टीसम्म पुगेको थियो । ब्राजिल र मेक्सीकोलाई २–० गोल अन्तरले हराउदैँ क्वटरफाइनलमा पुगेको हो । ब्राजिलका लागि नेमारले ५१ औँ मिनेटमा एक उत्कृष्ट गोल गरेका थिए । अर्को गोल पनि नेइमारको पासमा रोबर्टो फर्मिनोले ८८ औँ मिनेटमा गरेका थिए ।
बेल्जियमले जापानलाई ३–२ गोल अन्तरले हारउदैँ अन्तिम आठको यात्रा तय गरेको हो । प्रि–क्वाटरफाइनलमा पुगेको एक मात्र एसियाली टोली जापान मात्र पुगेको थियो । एसियाको अन्तिम आशा जापानमा थियो तर बेल्जियमसँग पराजित भएर घर फर्कनु र्पयो । प्रि –क्वाटरफाइनलमा स्वीट्जरल्याण्डलाई पराजित गर्दै स्वेडन अन्तिम ८ मा प्रवेश गरेको हो ।
सेन्ट पिटर्सवर्ग रंगशालामा भएको खेलमा पहिलो हाफ बराबरी खेलेका थिए । खेलको ६६ औं मिनेटमा स्वेडनका फोर्सबर्गले प्रहार गरेको बल स्वीट्जरल्याण्डका खेलाडीको खुट्टामा छुँदै गोल भएपछि स्वेडनले १–० गोलको अन्तरको जित निकाल्दै स्वेडन अन्तिम ८ मा पुगेको हो । मंगलबार राती सम्पन्न खेलमा इंग्ल्यान्डले टाइब्रेकरमा कोलम्बियालाई ४–३ ले पराजित गर्दै इंग्ल्यान्ड अन्तिम आठमा पुगेको हो ।
निर्धारित समय र अतिरिक्ति समयमा कोलम्बिया र इंग्ल्यान्डबीच १–१ को बराबरी भएपछि खेल टाइब्रेकरमा गएकोे थियो । रोनाल्डोको कप्तानीमा रहेको पोर्चुगललाई २-१ गोल अन्तरले हारउदैँ उरुग्वे क्वटरफाइनलमा पुगेको थियो भने, मेस्सीको कप्तानीमा रहेको अर्जे्न्टिनालाई ४–३ गोल अन्तरले हराउदैँ फ्रान्सले अन्तिम ८ को यात्रा तया गरेको थियो । इतिहासमै पहिलोपटक नकआउट चरणबाट बाहिरिएको अर्जेन्टिना यसअघि १९६२ र २००२ मा समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो ।